SOAMANDRAKIZAY : Nanamarika ny fiombonan’ny vahoaka malagasy ny lamesa lehibe
Omaly alahady 08 Septambra 2019 no fotoan-dehibe nihaonan’ny mpino kristianina Katolika manerana ny Nosy tamin’i Papa François , teny Soamandrakizay. 9 septembre 2019
Vahoaka manodidina ny enina hetsy mahery no tonga nanotrona ny lamesa lehibe. Nanome voninahitra izany ireo oloman-kaja tahaka, ny Kardinaly Desiré Tsarahazana, ny Filoham-pirenena mivady, ny filoham-piangonana eo anivon’ny FFKM, ny filoham-piangonana zandriny, ... Tsy nahasakana ireo mpino avy any amin’ny faritra velively ny fahalavirana fa saika tonga teto an-drenivohitra avokoa mba hijery any solon-tenan’i Kristy mivantana, hihaino ny hafatra apetrany, entina hanovana ny fiainana sy hitomboana bebe kokoa amin’ny fiainana maha Kristianina. Nanamarika ihany koa ny fiombonan’ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy an-kavanaka ny fivahinianany teto Madagasikara noho ireo hafatra marobe napetrany.
Etsy andanin’izay dia ,tonga marobe teny an-toerana ireo marary avy any amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy , ireo izay tsy salama te handray famindram-po sy fahasoavana avy amin’ny Kristy. Manantena fahasitranana avy amin’ny Kristy amin’ny alalan’i Papa François izy ireo. Nanome hafatra ho an’ny vahoaka iray manontolo, tsy an-kanavaka araka izany ny Papa Ray Masina ary nanambara fa “ tahaka ireo vahoaka izay nitangorona teo amin’ny lalan’i Jesoa dia tonga maro ianareo mba handray ny hafany ary hanara-dia azy. Nefa fantatrareo tsara fa tsy mora ny manara-dia an’i Kristy. Ampatsiahivin’ny Evanjelin’ny Lioka 14, 25 fa “ vahoaka maro no nanaraka an’i Jesoa” “.
Maro ny sedra mandalo amin’ny fiainan’ny Kristianina saingy nitaona ny Malagasy rehetra izy mba hiorina, hijery ny fifandraisana ara-pianakaviana, ny fifankatiavanaa na dia sarotra aza ny manara-dia ny Tompo. Nirindra sy nilamina ny lamesa lehibe tamin’io fotoana io na dia somary narahina hatsiaka sy rivotra.